Ovao ny loko ambadiky ny sary iray ao amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Amin'ity lesona ity dia lazainay aminao ny fomba fanovana ny loko ambadika sary iray ao amin'ny Adobe Photoshop, haingana, mora ary mitahiry ny aloka sy ny endriny.
1 Sokafy ny sary sy ny sosona duplicate
2 Misafidiana ary mamorona sosona vaovao miaraka amin'ny fanapahana
3 Mamorona ambadika vaovao
4 Avereno ny aloka sy ny endriny
5 Miampy fahalavorariana rehefa manova ny lokon'ny sarinao
Sokafy ny sary sy ny sosona duplicate
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop izay tiantsika hanova ny ambadika sy haverinay io. Azonao atao ny manao azy mora amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny sosona ao ambadiky sy ny fanindriana ny fanaraha-maso + c ary avy eo fehezo ny + v, na baikony raha miasa miaraka amin'ny Mac ianao. Safidy iray hafa ny manokatra ny menio "layer" ary manindry ny "layer duplicate". Ataovy hoe "aloka" io.
Misafidiana ary mamorona sosona vaovao miaraka amin'ny fanapahana
Amin'io sosona vaovao io hifidy isikaAmin'ity tranga ity dia izy roa vavy amin'ny sary. Raha te-hisafidy dia azonao atao ny mampiasa ny fitaovana misy ao amin'ilay programa, na dia ampirisihiko hampiasa ilay fitaovana fisafidianana haingana sy manadio bebe kokoa azy amin'ny alàlan'ny fampiharana ny sarontava sarontava. Raha tsy dia be loatra ny singa ao ambadika, azonao atao ihany koa ny mampiasa ny safidin'ny fisafidianana mandeha ho azy ny Photoshop "select subject", manadio hatrany ny safidinao amin'ny sarontava avy eo, matetika dia manome valiny tena tsara.
Raha loko matevina ny any aoriana, dia mety ho mora aminao ny misafidy azy amin'ny tsiranoka mazika ary avy eo avadika ny safidinao (command / control + shift + I). Safidio ny fomba fidinao, ny zava-dehibe dia hoe madio araka izay azo atao ny fifantenana, indrindra ny sisiny, ialao izany any amin'ity faritra ity sisa tavela tamin'ny lasa teo aloha, satria na dia toa tsy tsikaritra aza izy ireo, rehefa manova ny lokon'ny afara ianao dia hisongadina izany.
Vantany vao vita ny safidy, hanery ny baiko na hibaiko + c izahay ary hibaiko na hibaiko + v, ho hitantsika izany a sosona vaovao misy an'io fanapahana io. Hametraka azy eo ambonin'ireo sosona rehetra isika.
Mamorona ambadika vaovao
Ankehitriny milalao mamorona ambadika vaovao, noho izany dia tsindrio ny marika "Mamorona sosona fanenenana na fanitsiana vaovao", hita eo ambanin'ny menio misy sosona, ary hamorona a sosona vaovao misy loko mitovy. Azonao omena azy ny loko tadiavinao, nisafidy lilac aho. Apetraho ity sosona ity ambonin'ilay sosona "background" ary eo ambanin'ny sosona "sisa".
Raha ny layer clipping sy ny background vaovao noforoninay ihany no avelantsika hita, dia ho hitanao fa efa nanova ny lokon'ny afara amin'ny sarinao ianao. Na izany aza, ny endrika sy ny aloka very, mampiala ny zava-misy amin'ny montage. Hamboarinay haingana dia haingana izany.
Avereno ny aloka sy ny endriny
Tadidinao ve izany tany am-piandohana dia namorona sosona vaovao izay nantsoinay hoe "aloka"? Amin'izao fotoana izao rahoviana no hiditra izany. Hametraka azy eo ambonin'ny background misy loko isika ary hanova ny fomba fampifangaroana, hifantina isika maro (Azonao atao ny mahita an'io safidy io eo an-tampon'ny menio sosona).
Amin'izany no hamerenantsika ny aloka sy ny endriny, na dia ho hitanao aza fa ny loko voafidy dia ho maizina kokoa. Hamaha ity fanovana vaovao ity dia hamorona izahay roa sosona fanitsiana vaovao: miolakolaka sy hue / saturation (Azonao atao izany amin'ny fisafidianana ireo safidy ireo ao amin'ny menio fanenomana na fanitsiana vaovao, izay efa natoronay mba hanampiana ilay loko miloko fanamiana).
Ampitomboy ny jiro ary ampifanaraho ny fiolahana mba hamerenanao ilay tonony nomenao ny lafika vaovao. Mazava ho azy, tadidio fa raha mampiakatra be loatra ny jiro ianao dia ho very ny aloka sy ny endriny indray, milalao ny soatoavin'ireo sosona fanitsiana mba tsy hitrangan'izany.
Miampy fahalavorariana rehefa manova ny lokon'ny sarinao
Rehefa manova sary iray izahay, indraindray dia tsikaritry ny jiro sy ny tonony ny montage. Rehefa manova ny background isika, na dia ataontsika amin'ny loko matevina aza izany dia mety hitranga ihany koa izany. Misy ny vahaolana izay, na dia tsy lavorary aza izy io, satria misy fomba tsara kokoa hanalefaka ireo fifanoherana ireo, dia manome valiny tena tsara amin'ireo tranga ireo ary haingana be.
Rehefa vitanao ny dingana rehetra, ao amin'ny menio sosona mitady «mitambatra hita» ary tsindrio. Araka ny ho hitanao, izay mazàna sosona be dia be, dia ampahany amin'ny iray ankehitriny. Tamin'ny farany, Ao amin'ny menio sary, tadiavo ny safidin'ny tonony mandeha ho azy. Ny programa dia hanova ho azy ny feon'ny sary ary amin'ny fampiharana ireo fanitsiana mitovy amin'ireo sosona nisaraka teo aloha dia hahazo vokatra tsara lavitra ianao. Raha tianao dia azonao atao amin'ny tanana izany, manova ny hamafiny sy ny mahavoky azy, misafidy ny "hamafiny" ao amin'ny menio "sary".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ovao ny loko ambadika sary iray ao amin'ny Adobe Photoshop